स्वास्थ्य/जीवनशैली – Page6– News Of Nepal
कोरोना भाइरस फैलने क्रममा मानिसहरुमा यसबारेमा विभिन्न तर्क, धारणा र भ्रमहरु पनि उत्पन्न भैरहेका छन् । के घाममा बस्नाले कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ ? अथवा नखोकि १० सेकेन्डसम्म सास रोक्न सक्नु कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्दैन ? भन्ने जस्ता भ्रमित गर्ने किसिमका पोस्टहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको..
अमेरिकी राष्ट्रिय स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट (एनआईएच) ले मलेरिया (औलो) रोगको उपचारमा प्रयोग हुने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनलाई कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि परीक्षण गर्न औपचारिक अनुमति दिएको घोषणा गरेको छ। दी हिलमा छापिएको एक रिपोर्टका अनुसार टेनिसी राज्यको नेस्भिलस्थित भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालय..
कस्तो प्रकारको यौन क्रियाकलापले तौल नियन्त्रणमा कसरी सहयोग गर्छ
सक्रिय यौन क्रियाबाट व्यायाममा जस्तै लाभ मिल्छ भनिन्छ । त्यसो त यसले शारीरिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक एवं भावनात्मक रुपमा पनि फाइदा गर्छ । यौन क्रियाका क्रममा मान्छेहरु चिन्तामुक्त हुन्छन् । उनीहरुको शरीरमा यस्तो रसायन स्राव हुन्छ, जसले आपसमा प्रेम बढाउँछ । सक्रिय यौनबाट शरीरको समूचित व्यायाम पनि..
एजेन्सी – सेतो लसुनको फाइदाका बारेमा त हामी सबैलाई थाहा नै छ । लसुनमा अमृत समान गुणहरु हुन्छन् । आयुर्वेदमा उल्लेख भएअनुसार लसुनका कयौं गुणहरु छन् । सेतो लसुन मात्रै होइन, कालो लसुन झनै धेरै फाइदाजनक हुन्छ । धेरैलाई कालो लसुनको बारेमा थाहा छैन । कालो लसुन पनि सेतो लसुनकै अर्को रुप हो । कालो लसुन सेतो..
कोरोनाको आशंकामा बिहीबारसम्म नेपालमा २ हजार ८ सय ९५ जनाको नमुना परीक्षण
नेपालमा कोरोनाको आशंकामा २ हजार ८ सय ९५ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा २ हजार ३ सय ८२ र उपत्यका बाहिर ५ सय १३ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयलले अहिले १९३ वटा नमुना परीक्षण भइरहेको पनि जनाएको छ । यस्तै, अहिले देशभर ७..
नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शनिबारदेखि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भनिन्छ । विदेशबाट आएको कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा उनको आफ्नै परिवारको सदस्यमा सरेपछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्न थालिएको हो । सरुवा रोगका कति चरण हुन्छन् ? कुन चरणलाई के..
गर्मी लागेको छ । घरभित्रै बस्नुपरेको छ । तिर्खा मेट्न, स्वस्थ्य रहन र दिन कटाउनका लागि पनि कतिपयले फलफूलको जुस बनाएर सेवन गरिरहेका होलान् । फलफूल खाने कि फलफूलको जुस ? यो आफ्नो रुची र स्वादमा भर पर्छ । धेरैजसो फलफूललाई जुस बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ताजा जुस निकै लाभदायक हुन्छ । पिउनलाई..
सामान्यतया, आमाशयमा एसिडको उत्पादन धेरै भएमा एसिडिटीको समस्या हुन्छ, जसले गर्दा खाना राम्ररी पदैन । र, त्यसबाट जुन रस बन्छ, त्यो एसिडमा बदलिन्छ । पेटमा एसिड भएमा यसले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । लामो समयसम्म एसिडिटीको समस्या रहेमा अम्लपित्त नामको रोग लाग्ने गर्छ । यो रोग..
कोरोना लाग्नु पहिले स्वाद र गन्ध थाहा नपाउनु मुख्य लक्षण
गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउने अवस्था कोरोनाभाइरसको लक्षण हुन सक्ने ब्रिटेनका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। लण्डनस्थित द किङ्स कलेजको एउटा समूहले कोभिड-१९ को लक्षण देखिएको विवरण एउटा एपमार्फत् व्यक्त गरेका ४ लाखभन्दा बढी मानिसको जवाफको अध्ययन गरेको थियो। तर गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउनु,..
सङ्क्रमित ६५ वर्षीया वृद्धा भन्छिन् : आत्तिएर हुँदैन आत्मबल बलियाे चाहिन्छ
बागलुङ नगरपालिकाकी ६५ वर्षीया महिला नेपालबाट कान्छी छोरी भेट्न गत फागुन १४ गते बेल्जियम पुगेकी थिइन्। ती महिलाको एक महिना जति उतै घुम्ने रहर थियो भने छोरीको पनि धित मरुञ्जेल आमालाई घुमाएर नेपाल फर्काउने चाहना थियो। तर, विदेश पुगेको दुई सातामा नै चीन हुँदै विश्वभरि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्न..